Ama-Proteas ashintshela kubomvana kumdlalo okumele bawunqobe
Ama-Standard Bank Proteas athemba ukugqugquzelwa i-Pink Day kumdlalo wesine we-Momentum One-Day International (ODI) bedlala ne-India e-Bidvest Wanderers Stadium ngoMgqibelo. Ama-Proteas awakaze ahlulwe kwi-ODI begqoke ubomvana – sebanqoba ayisikhombisa kwimidlalo eyisikhombisa – okumele kubagqugquzele phambili njengoba besalwela i-series.
i-Pink ODI umcimbi ogqhamile kwi-calendar, abadlali, abaxhasi kanye nabalandeli bedlala indima ukuthola imali ezosiza ekulweni i-breast cancer. Kulonyaka, i-Breast Care Clinic e-Charlotte Maxeke Academic Hospital eGoli njengabazothola, yonke imali etholwayo osukwini izoya kubona.
Okwenza konke kuma-Proteas, u-Chris Morris, uthi lubalulekile usuku kubona bonke abadlali futhi kubanike okunye ukugqugquzeleka ukugcina irekhodi labo lokungahlulwa.
“Usuku olubalulekile kwi-South Africa,” kusho u-Morris ekhuluma ngosuku. “Sidlalela okubalulekile futhi umcimbi omuhle esiwudlalela phambi kwe-Wanderers ebomvana futhi egcwele. Kube usiko oluhle sidlala sigqoke okubomvana, senzela into esile futhi sinenhlanhla njengabadlali bekhilikithi ngokwenza esikwenzayo kanye nokuba nempilo. Baningi abantu ezweni lethu abane-cancer, ikakhulukazi i-breast cancer, lolusuku linemizwa elihambisana nayo futhi siyajabula ukuthi kukhona esingakwenza.”
“Kunengcindezi ejwayelekile kodwa ukungahlulwa kwimidlalo ebomvana kufaka enye incindezi,” kusho u-Morris. “Ukufa nokuphila, uma sihlulwa futhi i-series isiphunyukile. Sizobe silwela wonke amabhola kanye nama-runs. Ikhona incindezi kodwa iyini ikhilikithi ngaphandle kwencindezi, ngabe kuyabhora.”
u-AB de Villiers ululeme emuva kokulimala umunwe futhi uyabuya ukuletha isipiliyoni kanye nomfutho kubadlali abashaya phakathi nendawo. U-Morris uthi isipiliyoni sika-De Villiers phakathi nangaphandle kwenkundla kuzobaluleka emdlalweni, kanye namathiphu okuthi kungadlulwa kanjani kwi-spin se-India.
“u-AB ungu-AB, ngaphandle kwalokhu akulethayo kwinkundla kuphinde kube yilokhu akulethayo ngaphandle kwnkundla,” kusho u-Morris. “Uletha umoya phansi kanye nesipiliyoni. Ukuba nomdlali ohamba phambili obuyayo eqenjini kuyinto enhle. Ngiyakuthanda ukudlala enkundleni eyodwa no-AB, ungoyedwa wabadlali abakhulu emhlabeni futhi ungoyedwa walaba abahamba phambili abadlalela i-South Africa. Kwiqembu uletha okuningi kunama-runs, uletha ubu-AB de Villiers.”
i-India ingaphambili kwimidlalo eyisithupha ngo-3-0.
Amathikithi omdlalo asephelile. Umdlalo uzoqala ngo-13h00.
u-Kohli nama-wrist spinners bayaqhubeka nokucindezela ama-Proteas u-De Kock uphume amasonto amabili kuyela kwamane elimele isihlakala Ama-spinners e-India akhipha ama-Proteas babahlule kakhulu u-Markram ufakwe njengokapteni kuze kuphele i-ODI series uKohli uhole umjaho we-India ngekhulu elihle Ama-Proteas ahlosa ukulinganisa iso elilodwa libheke i-World Cup uDuminy ulindele enye i-ODI Series enomqhudelwano u-De Villiers uphumile kuma-Momentum ODI amathathu ngokulimala umunwe uNgidi no-Zondo babaliwe kwiqembu lama-Proteas lama-ODI